Weerar ka dhacay Dhuusamareeb oo lagu dilay askar | Entertainment and News Site
Home » News » Weerar ka dhacay Dhuusamareeb oo lagu dilay askar
Weerar ka dhacay Dhuusamareeb oo lagu dilay askar
daajis.com:- Rag hubeysan ayaa bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda galmudug waxaa ay kudileen laba kamid ah Ciidamada Gorogor ee kal hore dowladda Soomaaliya halkaasi geeysay.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in ragga hubeysan ay ka tirsan yihiin xoogaga Ahlusunna, isla markaana weerarka kadib ay horay usii qaateen Gaari Cabdi Bille ah oo ay la aadeen dhinaca degaanka Bohol.
Ilo xog-ogaal ah ayaa Risaala u sheegay in Gaariga Cabdi Billaha ah markii hore laga soo qaatay xoogaga Ahlusunna balse ay dib ula wareegeen, iyaga oo dilay qaar kamid ah askartii wadatay Gaariga.
” Ciidanka amniga Dhuusamareeb oo kajawaabaya falkan foosha xun ayaa kuhowlan soo qabashada kooxdan arxanka daran,cid walba oo qayb ka ah ama wax kafududaysayna sharciga ayaa lahorkeeni insha’allah. Qiil dambe maharin iyo diintoo lagu qaraabtaaye,Bohol ayuu ku yiri” Qoraal uu shaaciyay afhayeenka.